को महानायक बिवादमा बोलिन् प्रियंका ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
को महानायक बिवादमा बोलिन् प्रियंका !
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कहिलो को महानायक भन्ने विषयमा दोहोरी नै चलिरहेको छ । दिपा श्री निरौलाले दिएको एउटा अभिव्यत्तिको कारण अहिले फिल्मी क्षेत्र नै दुई धुब्रमा बिभाजित भएको छ ।
शनिवार मात्र नायिका केकी अधिकारी र ऋचा शर्माले दिपाको बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । आज प्रियंका कार्कीले आफ्नो भनाई राखेकी छिन् । दिपक राज गिरी र दिपा श्री निरौलासँग फिल्म खेलेका कलाकारहरु मात्र उनको समर्थनमा उत्रिएका छन् ।
उनको समर्थनमा प्रियंका लेख्छिन् ।
प्रियंकाले इन्टाग्रामको स्टोरीमा हालेको पत्र